Na-eweli èbè, ibu lashing, eweli Chain - Chenli
Electric yinye ndoli
Troelly / pole / ndọta
Waya eriri ịpị igwe
Plọ ọrụ Newslọ Ọrụ
Chenli kwenyesiri ike na mmepe bụ ụkpụrụ zuru oke. Anyị na-ahịa dị ka nduzi, na ọrụ welie asọmpi uru, mgbe ndị ọkachamara uru kasị kpọmkwem ụdị bụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ na n'elu-ọkwa.GỤKWUO
Nka na ụzụ Uru
Mkpakọrịta anyị na-eme ka anyị bụrụ nnukwu. Chenli na-eme ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi bụ ndị ọkachamara na nyocha, njikwa na ahịa. Onye ọ bụla tozuru oke inwe ikike ịkpalite ikike ya. Kedu nke na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ nyochaa otu ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ abụọ kwa afọ.GỤKWUO
Iru eru Uru
Chenli enwetala asambodo ISO9001, CE, GS, CCS, nke a na-ahụkarị n’otu ụlọ ọrụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, mkpuchi anyị PICC na-enye RMB2000000 ngwaahịa mkpuchi ụgwọ kwa afọ.GỤKWUO
Hentù Chenli nwere teknụzụ mmepụta teknụzụ dị elu na ndị otu njikwa, sistemụ njikwa usoro ọgbara ọhụrụ na teknụzụ mmepụta teknụzụ njikwa usoro arụmọrụ, ka emechara mgbanwe site na njikwa nchịkwa n'ime njikwa mgbochi.
ANYỊ NA N’WA NILE
Enterprise jikwaa echiche
Nchedo Kariri Ntinye Chenli A Pụrụ elitụkwasị Obi
Ahịa ziri ezi ruo mgbe ebighị ebi
Ọnwụ nọgidere, onwe rigging ụlọ ọrụ elu management uru, nkà na ụzụ uru, ika uru, mgbe niile izute omenala chọrọ.
Enterprise jikwaa nzube
Onye ndu nke rigging ụlọ ọrụ management ọhụrụ na nkà na ụzụ ọhụrụ. Tù Chenli dị njikere ịkwado gị mgbe niile, ga-eme ka ndị ahịa Chenli nwee akụnụba ruo mgbe ebighị ebi.
EB WEBBING INGLỌ
Super-ala Head Room Electric Chain ndoli
HSZ-D Chain ndoli
HSH-X Lever ndoli
HYDRAULIC AKWINGKWỌ igwe CLH1000
Lelee Ha niile
Companylọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ
mba na mpaghara
Ezigbo ụlọ ọrụ ngwa
Kedu Anyị na-eme
Nlekọta Nlezianya, Na-eburu Unlimited, Nchedo Bụ Eze
OT WE ANYK SI Arụ ọrụ
Sbè na akwa akwa
Chenli na-ebuli èbè ugbu a ghọrọ na-eduga enterprise na China. Na anyị na-eke ndị kasị ibu-ọnụ ọgụgụ omumuihe. Chenli nwere usoro mmepụta zuru oke site na akụrụngwa iji rụchaa ngwaahịa. Onye ọ bụla nhazi nwere onwe omumuihe, na-eme na-eweli èbè, ratchet eriri, ụgbọ ala towing belt si 0.5T ka 3000T. Anyị nwere ike ịmecha nnukwu iwu ngwa ngwa.
Chenli nwere ngwa ọrụ nyocha zuru oke ugbu a, nke na-eme ka anyị jide n'aka na anyị nwere ike gbaa gburugburu, site na 20T ruo 3000000, yana ịbya webbing, site na 20T ruo 50T.
Iche nsogbu nsogbu ego ihu, ndị ahịa ọ bụla na-achụ nnukwu uru. Usoro anyị na-ebuli site na 40% atụnyere afọ gara aga. Kwere na ike onye ọ bụla, kwere na Chenli.
Eweli mwekota bụ ụdị nke nnọọ adaba ngwá ọrụ, ọ pụrụ ime ka ọrụ gị mfe ime.Chenli eweli mwekota bụ nọ n'okpuru chenli eweli mwekota factory nke bụ ndị mbụ factory.Chenli aka nọmba nke ọkachamara staff.Super àgwà na ọrụ obi sie mkpara ha nwere ọnọdụ ka mma na nchekwa. Chenli eweli clamps merie ezi aha na Pearl River Delta, Yangzi River Delta Region, Northeast Region na-akpata nnukwu arụmọrụ price ratio.As wepụtara rigging ngwongwo soplaya, anyị na-iru ogologo azụmahịa mmekọrịta Shougang Group, Sino-petro. ngwaahịa: eweli oriọna SVC ụdị, trolleys, pulleys.We wetara OEM ọrụ maka Japan, Finland wdg
Chenli na-agbaso nchekwa na ogo ngwaahịa a oge niile, ma chetara ndị ọrụ na usoro ojiji jiri ntị na nchekwa.
Chenli akwa ike ígwè, anyị nwere ike na-emepụta welded yinye, eweli (hoisiting) yinye, m yinye, anụmanụ yinye, mbuli ụgwọ yinye, taya yinye na Plastic ntekwasa yinye wdg. Ihe fọrọ nke nta 300 iche, na ọtụtụ-eji dị iche iche nzube dị ka eweli, ndoli. , ebu, mbukota, nkem, ubi wdg.
Chenli na-emepụta ụdị ígwè dị iche iche, nke a na-eji nchara alloy dị ala. Ha nwere njirimara ma ọ bụrụ na mgbochi mmetụta, ikike nrụpụta dị elu, ductility, elongation.
Chenli G80chain na DIN5687, DIN5688, ọkọlọtọ German, ISO3076. Anyị nwere ike ịhazi elu dịka mkpa ndị ahịa si dị.
Anyị anaghị achọ ọ̀tụ̀tụ̀ dị ebube. Anyị anaghị achụ ọtụtụ iwu, ezi obi, jiri nlezianya na-elekọta, ihe ọhụrụ, nkenke, oke ọrụ na ọnụahịa, na-eweta ezigbo aha anyị. Anyị ga-anọgide na-egosi na elu àgwà ngwaahịa, na-agbalị ịbụ ihe pụrụ iche, na anyị ga-ejide aka ọnụ na ndị ahịa na-aga otu direction, na-eru ukwuu nweta.
Rigging ma na-eweli zuru ezu akụrụngwa
Mechanical akụrụngwa nọ n'okpuru ụlọ ọrụ ọhụrụ nke Chenli, ọ na-anọ n'etiti etiti adịgboroja, mpaghara hebei. Anyị na injinia nwere ọrụ nke ọtụtụ iri afọ dịka onye ndụmọdụ aka ọrụ anyị. Kwụpụ site Nzọụkwụ anyị na-emepụta akụrụngwa akụrụngwa. Site na eserese ọ bụla na agba anyị na-emeso usoro ọ bụla. Ngwaahịa a bara uru ma nwee ọnụ ahịa mpi mote, nke na-eweta ọtụtụ iwu. N'otu afọ anyị na-emepụta na-ere 87 tent nke ndị eriri ịpị igwe. Ejirila akụrụngwa akụrụngwa Chenli na ngalaba dị iche iche wee bupu ya na Malaysia, Singapore, Iran, India wdg.
Na-agba mgba ma na-eweli ...
Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap GỤKWUO
NO.33 FAZHAN ỌZỌ ỌZỌ, ỌGINGGWU QingYUAN, BAODING, HEBEI, CHINA